Kulankii Wasiirada arimo dibadeedka Urur Goboleedka IGAD oo maanta dib u dhac ku yimid, kadib markiii ay…
Kulan maanta lagu waday in ay iskugu yimaadaan Wasiirada arimaha dibada ee Urur goboleedka IGAD magaalda Nairobi ayaa waxaa ku yimid dib u dhac,kadib markii ay wasiirada arimada dibadeedka qarkood ay habeenkii xalay ahaa ay cudur daarteen soo gaarsiiyeen Wasaarada arimaha dibada ee Kenya.
Dib u dhaca kulankii maanta ee wasiirada ayaa waxaa shaaca ka qaaday wasaarada arimada dibada ee Kenya, waxa ayna sheegtay wasaardu in uu dib u dhacaan ka danbeeyay kadib markii ay soo xaadi waayeen wasiirada kuulankii laagu talo galay iyagoo soo gudbiyay cudur daar, iyagoo dhan kalena codsaday in kulanka laga dhigo maalinta Bare ee taariiqdu ku aadantahay 21/04/04.
Wasiirka Arimaha dibada ee Kenya ahna Guddomiyaha wasiirada arimada dibadedka Urur goboleedka IGAD Stephen Kolonzo Musyoka ayaa isagu socdaal gaaban ku soo bixinaayo wadamo ka tirsan qaarada Yurub,ilo ku dhaw dhaw wasaarada arimada dibada ee kenya ay maanta waxa ii sheegen in kolonzo la filaayo in uu maanta galinka danbe uu ku soo laabto Magaalada Nairobi.
Si kastaba ha’aatee Dib u dhaca kulankii wasriida Arimaha dibada ee IGAD ayaa waxaa dhan kale maanta walaac ka muujiyay ergada ka qeyb galayso Shir dib u heshiisiinta Somalida, ergada shirka Mbagathi ayaa maanta waxa ay wasiirada ka sugaayeen in ay ka hadlaan arimo dhowr ah oo ay ka mid tahay cunto la’aanta ergada heesato haatan.
Wajiga sadexaad ee shirka dib u heshiisiinta Soomalida ayaa maanta lagu wadaa in uu ka furmo Madasha shirka ee Mbagathi ee duleedka Magaalada Nairobi.
Furitaanka wajiga sadexaad ee shirka dib u heshiisiinta soomaalida ayaa ayaa waxaa uu ku soo beegmay xilli inta badan Hogaamiye Kooxeedyadu ay ka maqan yihiin Madasha shirka, iyadoo Urur Goboleedka IGAD ay horey ugu baaqeen in in dhammaan Hogaamiye Kooxeedyada Soomaalidu ay ka soo qayb galaan Wajiga sadexaad ee shirka Bilowgii bisha May, si loo taabo galiyo hanaanka shirka dib u heshiisiinta Somalia .
Dhinaca kale waxaa maanta kulan yeelanaya Wasiirada Arrimaha Dibadda wadamada ku jira Urur Goboleedka IGAD, kulanka Wasiirada ayaa la sheegay in ay kaga wada hadlayaan sidii shirka Soomaalida ee mudda dheer socday uu miro dhal u noqon lahaa loona dhisi lahaa Dowlad Ku meel gaah ah.
Warar laga soo xigtey Qaar ka tirsan Wasiradda Arrimaha Dibadda ee Wadamada ku jira Urur Goboleedka IGAD oo aan la carabaabin ayaa sheegay in ay ku rajo wayn yihiin in Wajiga Sadexaad ee shirka Soomaalida ay ka soo qayb gali doonaan dhammaanba Kooxaha Siyaasadda ka jira Dalka Somalia .
Kulankaan ay yeelanayaan Wasiiradda Arrimaha Dibadda ee Wadamada ku jira Ururka Igad ayaa waxa uu dabo socdaa kulan kan ka horeeyay oo ay isla magaalada Nairobi ku yeesheen 7-dii bishaan, iyagoo xilligaasna ugu baaqay Qaybaha siyaasada inay dib ugu soo laabtaan Madasha shirka, ka hor 20 May, laakiin Baaqaasi ayaa waxa uu u muuqdaa mid aan wali hirgalin, inkastoo la sheegay in maanta la filayo in Hogaamiyeyaal shirka ka soo baxay in ay dib ugu laabtaan madasha shirka.
Dagaal shaley galinkii dambe ka dhacay agagaarka Xaramka ee ka degaanka Jilib ayaa lagu soo waramayaa in uu dhaliyey khasaare isugu jira Dhimasho iyo Dhaawac oo soo gaarey dhinacyadii ay dirirtu dhex martey.
Sida lagu helo wararka ka imaanaya deegaanka Xaramka oo shaley galinkii dambe ay uu dagaalk Qaraari ku dhex marey Beelo wada dega deegaankaasi ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan shan qofood oo dhamaantoodba ahaa Maleeshiyadii dagalaamaysay, halka Dhaawacuna uu Caga cagaynayo Tobaneeyo.
Dagaalka Tuuladda Xaramka oo dhawr jeer soo noq noqday ayaa sababta shaley dhalisay dagaalka lagu sheegay in ay ka dambaysay ka dib markii Beesha gacanta ku haysa Tuullada Xaraka ay Duulaan ku qaadeen dhulka hawdka ah ee ay degan yihiin Beesha ay dirirto kala dhaxayso.
Dagaalka ka dhacay Xaramka oo socday muddo saacado ah ayaa markii dambe istaagay iyadoo aysan jirin cid dhex dhexaadin ka sameysay, laakiin xaaladda Deegaanka Xaramka ayaa lagu soo waramayaa in ay wali kacsan tahay Dhiilo colaadeedna ay jirto iyadoo laga cabsi qabo in ay dib isugu soo laabtaan maleeshiyooyinkii uu dagaalku dhex marey.
Beeralayda Gobolka Shabeeladda Hoose ayaa cabasho ka muujiyay Cayayaan aan la garaneyn oo la sheegay in uu dhibaato ba’an ku hayo Dalaga Beerahooda.
Beeraleyda ku dhaqan Gobolka shabeellada Hoose ayaa waxaa soo food saartey dhibaato xoogan oo ay kala kulmeen Cayayaan aan horey loo arag kasoo dhibaato ku haya Abuurka Beeraha ee xilligaan.
Qaar ka tirsan Beeralayda gobolka oo lasoo xiriiray Shabakadan ayaa sheegay in inta badan Xilliga roobka ka dib ay arki jireen Cayayaan yar yar oo dhibaato u gaysta Dalaga Beerahooda, laakiin Cayayaankaan hadda dhibaatada ku hayaa uu ka duwan yahay Cayayaanadii ay arki jireen, waxayna sheegeen in Muuqaal ahaan Cayayaankaani uu shabaho Tixriga.
Beeralaydu waxay sheegeen in aysan haysan daawo ay kula dagaalamaan Cayayaanka Xaalurinta ku haya Beerahooda, iyagoo sheegay in aysan dili Karin Sunta loo adeegsado Cayayaanka ee ay horey u haysteen.
Waxaa kaloo Beeralaydu intaasi ku dareen in Cayayaankaani uu waxyeelo u gaysanayo gabi ahaanba Dalagyada Beeraha sida Galeyda Haruurka iyo Digirta iyo kuwo kale.
Beeraleyda gobolka Shabeeladda Hoose oo horey uga Cabanayey dhibaato Biyo la’aaneed ka dib markii Roobabkii Gu’ga ay yaraadeen ayaa waxaa niyad jab ku abuurey Cayayaankaan aan la garanayn ee dhibaatada ku haya, waxayna ka codsadeen Hey’addaha Caalamiga ah in ay ka caawiyaan sidii ay ula dagaalimi lahayeen Cayayaanka dhibaatada ku haya Beerahooda.
Madaxwaynaha Maamul Goboleedka Puntland Col, C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Hogaamiyayaal la socday ayaa shaley galinkii dambe gaarey Magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Col: C/llaahi Yuusuf iyo Hogaamiyaasha kale ee la socday oo ka soo duulay Deegaanka uu madaxda ka yahay ee Puntland ayaa lagu soo waramayaa in si diiran loogu soo dhaweeyay Magaaladda Nairobi.
Wafdiga la soday C/llahi Yuusuf ayaa la sheegay in ay ka mid ahaayeen C/casiis Sheekh Yuusuf, Maxamed Cusmaan Maye, Gen, Cade Muuse, iyo xubno kale ayaa Ujeedada Safarkoodu yahay sidii ay uga qayb gali lahaayeen Wajiga Sadexaad ee shirka Dib u Heshiisiinta Soomaalida ee Muddada hakadka ku jirey.
Soo dhawaynta xubnaha uu horkacayey C/llaahi Yuusuf ayaa la waxaa Garoonka kaga hor yimid qaar ka tirsan Ergada Soomalida ee ka qayb galeysa shirka dib u heshiisiinta waxaana sida wararku nagu soo gaarayaan Ergada C/llaahi Yuusuf Garoonka kaga hor timid ka mid ahaa Ra’iisul Wasaarihii hore ee Dowladda Kumeel Gaarka ah Xasan Abshir Faarax iyo Xubno kale.
Kooxihii dhawaan ku dagaalamey Waqooyiga Magaalada Muqdisho ayaa xaley Rasaas Culus oo ka dhacaysay Qoryaha Nuucyadooda kala duwan isku waydaarsaday goobaha ay isku hor fadhiyaan.
Rasaasta ay iswaydaarsadeen kooxahaan ayaa waxaa laga maqlayey in badan Xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa socotey qadar daqiiqado ah, iyadoo markii dambana iskeed u joogsatey, lama oga illaa iyo hadda khasaaraha dhabta ah ee ay gaysatey rasaastii ay xaley is waydaarsadeen kooxaha isku hor fadhiya Waqooyiga Magaalada Muqdisho.
Labada Maleeshiyo ee uu dagaalku dhex marey ayaan la kala qaadin tan iyo markii ay dirirtu dhex marey muddo haatan laga joogo labo todobaad, iyadoo waan laga dhex wadayna lagu guul dareystey in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya labadaasi kooxood.
Dhinaca kale garabka uu hogaamiye Cumar Filish ayaa ka digey colaad ay sheegeen in laga abaabulayo Hotel Ramadaan oo ku yaala waqoogi Magaaladda Muqdisho, iyagoo sheegay in aysan gacmaha ka laaban doonin waxyaabaha laga wado Hotelkaasi inkastoo aysan sheegin waxa ay sameyn doonaan.
Dhaqaatiirka Caafimaadka ee ka hawl gali jirtey Magaalo madaxda gobolka Sool ee Laascaanood ayaa lagu soo waramayaa in ay isaga huleeleen halkaasi ka dib markii ay soo wajahday cabsi dhinaca ammaanka ah.
Wararka naga soo gaaraya Magaaladda Laascaanood ayaa sheegaya in dadka ku dhaqan deegaankaasi ay soo food saartey dhakhaariit la’aani ka dib markii ay halkaasi isaga baxeen dhakhaatiirkii ka hawli gali jirtey magaaladaasi.
Ka bixitaanka dhakhaatiirta ee gobolka Sool ayaa la xiriirinayaa ka dib markii dhakhaatiirta ay soo wajahday Cabsi dhinaca ammaankooda ah iyaodoo la sheegay in qaar ka tirsan dhakhaatiirta lagu raadsanayo aano Qabiil iyaga oo aan waxba galabsan.
Gobolka Sool oo ay horey uga jirtey dhakhtar yari ayaa arrintaani waxay ka dhigaysaa in dadwaynaha ku dhaqan deegaankaasi ay waayaan gabi ahaanba dhakhaatiir dawaysa.
Waxaana la sheegayaa in dadka Bukaanka ah ee Reer Sool ay Dawooyin u soo raadsanayaan Goobo ka baxsan Gobolka Sool, taaso dhibaato xoogan ku ah dadka ku dhaqan gobolka.
Wararku waxaa kaloo intaasi darayaan in dhakhaatiirta isaga huleeshay Gobolka Sool uu ka mid yahay Dhakhtar Caan ka ahaa gobolka laguna magacaabo Shahaado, waxaana maalin kasta la keenaa magaaladda Laascaanood dad la il daran dhaawacyo soo gaarey iyodoo qaarkoodna ay u nafwaayaan daryeel la’aan awgeed.
Ciidamada Mareykanka eek u sugan dalka Ciraaq ayaa lagu soo waramayaa in ay weerar xagga Cirka ah ku dileen afartan qof oo Ciraaqiyiinn Rayid ah.
Weerar xaga Cirka ah oo ay qaadeen Ciidamada Mareykanka eek u sugan dalka Ciraaq ayey ku dileen ugu yaraan afartan qof oo Ciraaqiyiin ah in ka badana ku dhaawaceen weerarkaan oo dhacay Xaafada Makradii oo ku taalada Xuduuda u dhexaysa Ciraaq iyo Syria.
Sida ay sheegeen dad goob joogayaal ahaa Diyaaradda Dagaalka ee Mareykanka yaa gantaalo la beegsadey goob ay ku sugnaayeen dad u dabaal Dagayey Xaflad Aroos, laakiin General ka tirsan Ciidamada Mareykanka ayaa isna sheegay in Dagaalkaasi lagu qaadey goob ay ku sugnaayeen waxa uu ugu yeeray dagaalyahono Shisheeye ah.
Dhinaca kale Talefishinka ku hadla Afka Carabi ee Fadhigiisu yahay Imaaraatka Carabta ee Al-Carabiya ayaa dhacdadaan ku tilmaamey mid Xasuuq loogu gasytey dad aan waxba galabsan oo Rayid ah .
Dhibaatooyinka Nuucaan ah ee duqayn loogu gaysto dad goob isugu soo ururay oo u dabaal dagaya Xaflado Aroos ayaan aheyn tii ugu horeysay iyadoo Ciidamada Mareykanku ay dhuqayn ugu gaysteen dad ku sugnaa goob Xafladeed isla Dalka Ciraaq.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Xaley Cambaareeyay Falalka Wuxushnida ah ee Ciidamada Israel ay ku dhuminayaan Boqolaal guri oo ku yaala Deegaanka Rafah.
Hogaamiyaha Reer Falastiin Yasser Arafaad ayaa soo dhaweeyay Tallaabada Cambaareynta ah ee ay qaadeen Golaha Ammaanku, wuxuuna dhinaca kale ku tilmaamtey falalka ay gaysanayaan Israel inay yihiin kuwo muujinaya in ay lugaha kula jiraan falal ay ku gaysanayaan dambiyo dagaal ayna mudan yihiin in Caalamku la xisaabtamo.
Dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay ee ka immaanaya Deegaanka Rafah ayaa sheegaya in Ciidamada Israa’iiliyiintu ay ku dileen shan qof oo ah Rayid ah tiro kale oo fara badana ay dhaawacyo u gasteen.
Taleshinadda ku hadla Afka Carabiga ee Al-jazeera iyo Al-Carabiya ayaa soo bandhigay Dhawacyo fara badan oo ay askarta israa’iil ku dhawaaceen Deegaanka Rafah, inkastoo ay soo baxday Cambaareynta golaha amaanka ee ku aadan falalka ay gaysanayaan Ciidamada israle hadana majiraan wax is badel ah oo ay muujiyeen Israeliyiiintu.
Koox xiriir la leh Abu Muscab Al-Sarqawi oo ah Hogaamiye Sare oo ka tirsan Ururka uu madaxda ka yahay Sheikh Osama bin ladin ayaa sheegay in ay fuliyeen weerarkii lagu diley Cisidiin Saliim.
Kooxdaasi oo isku magacawday in yihiin kooxdii Jihaadka oo la sheegay in Sarqawi uu hogaamiye u yahay in ay lahaayeen qoraal dhawaan lasoo dhigay website Islami ah oo lagu xaqiijiyay in ay dambeeyeen wareerkaasi.
Dhinaca kale Saraakiil ka tirsan Isbaheysiga uu hor kacayo Mareykanku ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa sheegay in Weerarkii is miidaaminta ahaa ee lagu diley Cisidiin Saliin uu ahaa astaamaha lagu yaqaano Al- Sarwaqi.
Saraakiishu waxaa kaloo ay sheegeen in Weerarka lagu dhiley Cisidiin uu ahaa mid si wayn looga soo shaqeeyay, waxayna sheegeen in Sarqawi uu yahay ninka ay tuhun san yihiin in uu ka dambeeyay Weeraro dhawr ah oo ismiidaamin ah oo laga fuliyey Gudaha dalka Ciraaq.
Dowlada Britain ayaa sheegtey in ay xireyso Safaaradeeda Magaalada Tahran ee Caasimada dalka Iran.
Tallaabadaan ayaa ka dambaysay ka dib markii Mudahaaraad xoog badan ay sameeyeen dad Iiraaniyiin ah iyagoo weerarey dhismaha Safaarada ee Caasimada dalkaasi.
Dadka Mudaharaadka Sameynayay ayaa Safaarada ku Tuuryeeyay dhalooyin kala soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, waxaana isla markiiba ku soo baxay Ciidamada Ammaanka iyagoo ka hortagaya in dhibaato kale oo gasyto Safaarada.
Ciidamadda Ammaanka ee dalka Iiraan ayaa isticmasaley Sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala eryaan dadka Mudahaaaradka Sameynayay.
Dhinaca kale dowladda Britain wax faah faahin ah kama bixin inta ay xirnaan doonto Safaaradoodu iyo in ay dib u hawli gali doonto.